केवल ज्वराे आउनु मात्रै काे-राेनाकाे लक्षण हाेइन, यदि यी ३ लक्षण देखिएमा तुरुन्त लिनुहाेस् डाक्टरकाे सल्लाह ! – Sapana Sanjal
June 1, 2021 266
Sapana Sanjal : केवल ज्वराे आउनु मात्रै काे-राेनाकाे लक्षण हाेइन, यदि यी ३ लक्षण देखिएमा तुरुन्त लिनुहाेस् डाक्टरकाे सल्लाह ! पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने गरी को- रोना भा-इरस संक्रमणले बिरामीको गन्धको शक्ति र मुखको स्वाद बिगार्दैछ । यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बिजरामीहरुमा भइरहेको छ ।
थप रूपमा, पचा’-उन योग्य र पौष्टिक खाना, दाल, ताजा तरकारीहरू राम्रो पकाए पछि मात्र खानुहोस । शरीर-मा भाइरल ज्वरोले पानी कम गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सा-मान्य व्यक्तिले पनि दैनिक क-म्तिमा १० गिलास पानी पिउनु पर्छ । भिटामिन सीको साथ ताजा फलफूलहरू पनि खानुहोस् ताकि शरीरको प्रतिरक्षा मज-बूत रहोस । स्रोत : अमर उज्वाला
काेराे-ना भा- ईरस बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
Prevचीनमा को’रोना सङ्क्रमण फेरि बढ्दै, बेलायतमा तेस्रो लहरको चे’तावनी
Nextउज्जवल थापाको मृत्यु भएको छैन, भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह
नेपालमा खोप नआउने! तीन अमेरिकी कम्पनीले दिए यस्तो निराश बनाउने जवाफ
निधारबाटै थाहा हुन्छ, तपाई बुद्धिमान की जिद्दि ?